Uyaqhubeka Umbukiso weZimbabwe Book Fair eHarare
Abalobi abangena umbukiso wamabhuku walonyaka owe Zimbabwe International Book Fare, bakhuthaza abamankampani adinda ingwalo ukube benze atholakale ngobunengi, ngentengo ephansi okuzakwenza wonke umuntu anelise ukuwathenga.
Bathi ukutholakala kwawo emalutshwana yikho okubangela ukuqonga kwenani labawathengisa okungekho emthethweni i-Pirating, bacine belahlekelwa yinzuzo.
Abalobi bakhuthaza abadinda amabhuku ukuba bathenge imitshina yakulezi nsuku, okuzaphathisa ekwehliseni intengo yokuwadinda leyokuwathengisela uzulu.
Unkosazana Virginia Phiri omunye wabalobi abadumileyo uthi lesi simo sePiracy senza abantu bacine bethenga amabhuku ezitaladeni, okungekho emthethweni ngoba edula ezitolo.
Wengeza uMaPhiri ethi bangasebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuwadinda amabhuku la, kuzaphathisa kakhulu ibhizimusi labo, bethole inzunzo engcono.
Unkosikazi Sibongile Jele ngomunye wabafundisa esikolo semfundo yaphezulu se National University of Science and Technology oze kulombukiso owenzelwa eHarare. Yena uthi endaweni yokumotsha isikhathi kuxotshanisanwa labePiracy laba ngabe abakuleli bhizimusi kanye lohulumende bayadinga ezinye indlela zokuluqeda loludubo.
Okusekelwe ngunkosikazi Sifundo Nkomo, ingcwethi kwezokulwela amalungelo abantwana, othi bona njengabathengi ikakhulu abemaphandleni babhekane lenkinga yokufinyelela intengo yalamabhuku bacine bethenga wonalawo athengiswa ezithaladeni.
Abalobi bathi kunje akula abakutholayo ngenxa yalesi simo ngakho kungenziwa kube semthethweni okwenziwa yilabo abadinda la mabhuku okungekho emthethweni, abalobi bathi kungabaphathisa ukuyithola inzuzo ngasikhathi sinye uhulumende laye ethola imithelo.